You chọrọ itinye akwụkwọ dị ka onye kwagara nwere ikike ọsụsọ nke ukwuu?
Iwu mbata na ọpụpụ » Migharị nwere nghọta dị elu - iwu mbata na ọpụpụ
Atụmatụ ndị si mba ọzọ kwagara na nke Dutch si eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịdọta ndị na - akwaga mba ọzọ ihe ngwa ngwa. Ndị ọrụ ruru ogo si mba dị na mpụga European Union nwere ike ịrụ ọrụ na Netherlands dịka ọmụmaatụ nnukwu ọkwa njikwa ma ọ bụ dị ka ọkachamara n'okpuru ọnọdụ atụmatụ a.
Ọ B APR AP EGO EGO NA-EKWUR MTA ỌB HR SK SITE?
Migharị nwere nghọta dị elu - iwu mbata na ọpụpụ
Atụmatụ ndị si mba ọzọ kwagara na nke Dutch si eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịdọta ndị na - akwaga mba ọzọ ihe ngwa ngwa. Ndị ọrụ ruru ogo si mba dị na mpụga European Union nwere ike ịrụ ọrụ na Netherlands dịka ọmụmaatụ nnukwu ọkwa njikwa ma ọ bụ dị ka ọkachamara n'okpuru ọnọdụ atụmatụ a. Agbanyeghị, ma onye na - akwabata ihe ọmụma na onye were ya n'ọrụ aghaghị ime ọtụtụ ọnọdụ.
> Ọnọdụ ndị kwagara mba ọzọ siri ike
> Rịọ maka onye ọbịa ihe ọmụma
> Kaadị acha anụnụ anụnụ nke European
Ọnọdụ ndị kwagara mba ọzọ siri ike
You bụ onye kwagara n'obodo ọzọ, ịchọrọ itinye aka na akụ na ụba Dutch? Ọ bụrụ otu a, ị ga-ebu ụzọ chọọ obibi. Tupu e nye gị ikike obibi, ị ga-enwerịrị nkwekọrịta ọrụ gị na onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha na Netherlands nke IND họpụtara dị ka onye nkwado ama esonye na aha ọha nke ndị nkwado. Also ga-enwerịrị inweta ego ga-ezuru gị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwenye na ụgwọ ọnwa n'ahịa gị na onye were gị n'ọrụ.
Na mgbakwunye, ọtụtụ (ọnọdụ) ndị ọzọ metụtara gị dị ka onye kwagara ala ọzọ nke nwere ikike. Kedu ọnọdụ dabara na ọnọdụ gị. Na Law & More, ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ nwere ngwa ngwa na nke onwe. Ha ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka iji ngwa gị. Tupu ịmalite ngwa ahụ, ndị ọkachamara anyị ga-enye gị ozi niile dị mkpa ka ị ghara iche ihe ịtụnanya ọ bụla.
Ọbụghị naanị gị, kamakwa ụlọ ọrụ ebe ị ga - arụ ọrụ nwere iru ụfọdụ ọnọdụ. You bụ ụlọ ọrụ na-achọ ịre ndị ọpụrụiche nwere ọrụ ọfụma ọrụ? N'okwu ahụ, ị ​​ga-eburịrị ụzọ mara na IND dị ka onye nkwado. Rdabere na ụlọ ọrụ gị dị mkpa. Emere ka ndi ulo oru gi dika onye nkwado? N'okwu ahụ, ụlọ ọrụ gị ga-ekwenye n'ọrụ ndị a: ọrụ nlekọta, ọrụ inye ozi na ọrụ nlekọta. Companylọ ọrụ gị anaghị eme nke a? Ọ bụrụ otu a, nke a nwere ike ibute iwepụ nnabata dịka onye nkwado.
Want chọrọ ịkwaga Netherlands? Kpọọ enyemaka enyemaka gbasara iwu
Rịọ maka onye ọbịa ihe ọmụma
Enyerela gị ikike obibi? Ọ bụrụ otu a, oge ị ga-eji biri na ya ga-ahazi ga-abụ oge nke ọrụ ọrụ gị ga-ewe karịa afọ 5. Enwere ike ịgbatị ikike ahụ na-enweghị njedebe.
N'ime oge ikike obibi gị, ị nwere ike ịgbanwe onye na-ewe gị n'ọrụ dịka onye nwere ọgụgụ isi nwere ikike ịga ọrụ ma sonye na ụlọ ọrụ ọzọ nke IND kwadoro dị ka onye nkwado. Ma ndị agadi ma ndị ọhụrụ na-arụrụ ọrụ ga-ewetara ntụgharị mgbanwe ọrụ gị na IND n'ime izu anọ.
I gha abughi onye n’enweghi ego dika onye aka ochie nke nwere ikike? N'okwu ahụ, inwere ikike ịchọ oge ọnwa atọ site na ụbọchị ịkwụsị ọrụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike isonyere onye ọzọ na-arụrụ ọrụ (onye na-akwado ọrụ) dị ka onye ọchụnta ego nwere ọgụgụ isi nke ọma n'ime oge ọchụchọ ahụ, IND ga-ewepụ ikike gị.
Kaadị acha anụnụ anụnụ nke European
Ruo June 2011, onye na-akwaga mba ọzọ nwere ọgụgụ isi ga-enwe ike itinye akwụkwọ maka EU Blue Card (EU Blue Card) na mgbakwunye na ikike obibi chọrọ. Udi Elupu EU bu ebe obibi na ikike oru ndi obodo ndi okacha amara nwere ikike nke na enweghi obodo nke otu ndi otu European Union.
Kaadị European Blue Card na-enye ndị si mba ọzọ nwere ọgụgụ isi ọtụtụ uru. Nke mbu, onye were oru a ma ama nke dibia amaghi ama gha eme ya ka onye ichoputara ya. Na mgbakwunye, dịka onye ọchụnta ego dị oke mkpa, onye jigidekwa European Blue Card, ị nwere ike ịrụ ọrụ na Steeti ọzọ mgbe ị rụchara ọrụ na Netherlands ọnwa iri na asatọ, ma ọ bụrụhaala na ị ga-eme ihe ndị a chọrọ na Ọchịchị State.
Iji ruo eruo maka European Blue Card, ị ga-enwerịrị ọnọdụ siri ike karịa maka ikike obibi dị ka onye kwagara mba ọzọ maara nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwerịrị nkwekọrịta ọrụ maka ọnwa iri na abụọ ma ọ bụ karịa, mechaa opekata mpe mmemme afọ atọ na agụmakwụkwọ ka elu (hbo) wee nweta opekata mpe ụgwọ ụgwọ nke Blue Card kwa ọnwa.
Ndị otu ndị ọka iwu ọpụpụ ọka iwu ga-eduzi gị ma tinye akwụkwọ maka gị maka IND. Ọ ga-amasị gị nke a ka ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ị ga - achọ ndụmọdụ? Biko kpọtụrụ Law & More. Anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.